မတ်လ 24, 2020 အားဖြင့် FaceTime လမ်းညွှန်aComment ချန်ထား
သင်ဘယ်လိုသင်နှစ်သက်တဲ့မှနားထောင်မယ်လို့ Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့အပေါ်ဂီတ သငျတို့သကိုနားထောင်နိုင်သောအရာကိုဖြစ်လိမ့်မယ်? ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစား, သင့်ရဲ့လက်ပတ်နာရီမော်ဒယ်အပေါ်သို့မှီခိုကြောင်း. ဤတွင်သင် iPhone ကိုမှတွဲမရှိဘဲသင်၏ Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ကို အသုံးပြု. လုပျနိုငျရှိသမျှကိုကွဲပြားခြားနားတဲ့ functions တွေရလိမ့်မယ်.
မည်သည့် watchOS running Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ 4.1 သို့မဟုတ်ပိုမိုမြင့်မားသည်သင်၏အပေါ်ကိုဖန်ဆင်း collection များကိုများနှင့်ဖွင့်စာရင်းများကိုနားထောင်ရန်ရန်သင့်အား enable ပါလိမ့်မယ် iPhone ကို. သင်တို့ကဲ့သို့ application များအတွက်ထိုနည်းတူညှိနိုင် Spotify နဲ့ iHeartRadio, နည်းတူ Apple ကဂီတ (အမှု၌သင်တို့တစ်ထောက်ခံသူနေ).
တစ်ဦး Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့စီးရီး3သို့မဟုတ် Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့စီးရီး4watchOS running 4.1 သို့မဟုတ်မြင့်မားသောလူအပေါင်းတို့သည်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့လုပျနိုငျ, သေးကအထိုနည်းတူ connection ကိုမှလုပ်နိုင် Apple ကရေဒီယို သငျသညျ iCloud မှတစ်ဆင့်တက်ကိုက်ညီခဲ့ကြပြီးမည်သည့်ဂီတ.
ပို seasoned မော်ဒယ်များရုံသင့်ရဲ့ iPhone မှတစ်ဆင့် piggybacking အားဖြင့်ဂီတ play နိုင်ပေမယ့်, အဆိုပါစီးရီး3နှင့်4မိုဃ်းတိမ်ကနေတရားဝင်ဂီတစီးဆင်းနိုင်ပါတယ်. ဘယ်လိုအကြောင်းကိုကျွန်တော်မှအမျိုးမျိုးသောချဉ်းကပ်မှာ gander ယူ သင့်ရဲ့ Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့အပေါ်ဂီတ Listen.
1 iPhone ကိုမရှိရင်အသုံးပြုမှုဂီတအဘို့ Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့
iPhone ကိုမရှိရင်အသုံးပြုမှုဂီတအဘို့ Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့
သင့်ရဲ့လက်ပတ်နာရီမှ Segue. ပင်မမျက်နှာပြင်မှ bounce မှသတင်းထုတ်ဒစ်ဂျစ်တယ်သရဖူ. တေးဂီတလျှောက်လွှာအပေါ်ကိုထိပုတ်ပါ. ကြောင်းအချက်အနေဖြင့်, သင်သည်သင်၏ကွဲပြားခြားနားသော collection များကိုများနှင့်ဖွင့်စာရင်းများကို၏ပုံငယ်များမှတဆင့်လှန်နိုင်ပါတယ်. သို့သော်ငြားလည်း, အဆိုပါစာကြည့်တိုက်များအတွက်ကျမ်းပိုဒ်များနှင့်ပြသစာရင်းများများအတွက်အပိုင်းအပေါ်ကိုထိပုတ်ပါအပေါ်ထိပုတ်ပါ, အဆိုတော်များ, အယ်လ်ဘန်, သို့မဟုတ်သီချင်းများ.
သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်သင်၏အလက်ပတ်နာရီနှင့်အတူချိန်ညှိသည့်ဌန်မှတဆင့်ပွတ်ဆွဲနိုင်ပါလိမ့်မယ်. တစ်ဦးစုဆောင်းမှုအပေါ်ကိုထိပုတ်ပါ, သီချင်းစာရင်းကို, လက်မှုပညာသည်, သို့မဟုတ်ညှိသင်ကြားရန်ဆန္ဒရှိ. သင်က Play စ / ဆိုင်းငံ့ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်သင့်လက်ပတ်နာရီမှသင်၏ဂီတကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်, အောက်ပါလမ်းကြောင်းမှလမ်းညွှန်, ဒါမှမဟုတ်အတိတ်ခြေရာခံဖို့ဖွယ်ရှိနေသည်. သငျသညျထိုနည်းတူဒစ်ဂျစ်တယ်သရဖူလှည့်အားဖြင့်အသံအတိုးအကျယ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်.
အကြောင်းကိုပြည့်စုံသတင်းအချက်အလက်များလည်းပါဝင်သည်သောဤဆောင်းပါးကိုဖတ်ပါ ဘယ်လိုက iPhone မရှိရင်ဂီတများအတွက်အသုံးပြုမှု Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့မှ. သင်သုံးပြီးလုပျနိုငျရှိသမျှကိုကွဲပြားခြားနားတဲ့ functions တွေရလိမ့်မယ် Here Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့က iPhone မှတွဲမပါဘဲ.
သင့်အနေဖြင့်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖော်ပြချက်မှတ်ချက် box ကို အသုံးပြု. ဤဆောင်းပါးနှင့်ဆက်စပ်သောသင့်ရဲ့မေးမြန်းချက်မေးရန်အခမဲ့များမှာ. နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ website ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု downloadfacetime.com ပိုမိုအသုံးဝင်သည့်အချက်အလက်များအတွက်မှန်မှန်.
အောက်မှာ Filed: FaceTime Download Tagged နှင့်အတူ: Listen Music on Your Apple Watch without iPhone